admin – Page 3 – Puntland Voice
Nabadoono kala socda Beelihii ku dirirey Degmada Rako oo bilaabay dadaal lagu soo afjarayo colaada
Rako (AB):-Nabadoono badan oo ka kala socda beelihii dhawaan ku dirirey degmada Rako ayaa wada dadaal ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan colaada labada maleeshiyo Beeleed. Labada dhinac ismimo,Nabadoono iyo guurti ka kala socda ayaa markii ugu horeysay isa […]
Shir daba socda heshiiskii Road Map oo maanta Muqdisho uga furmay Dowlada iyo qaar ka mid ah Maamul Goboleedyada Dalka
Xarunta ugu weyn saldhigyada Ciidamada Midowga Afrika ee Xalane waxaa maanta ka furmay shir xoojin u ah kii dhawaan lagu kala saxiidy heshiiskii ahaa Road Map-ka kaasoo ay wada saxiixeen dhinacyada Soomaaliya isku haya marka laga reebo Xarakada Alshabaab. Shirkaani […]
Cutubyo ka tirsan Ciidamada Uganda oo dalbaday in Muqdisho dib looga celiyo
Muqdisho (AB):-Qaar ka mid ah cutubyada Ciidamada Uganda ayaa ka codsaday dowladooda inay dib ug u cerliyaan dalkooda kadib 9 bilood oo ay Muqdisho ka howlgalayeen . Wargeys ka soo baxa dalka Turkiga ayaa qorey in ciidamo badan oo u […]
Khasaaraha ka dhashay dagaal shalay Xarakada Alshabaab ay ku qabsadeen dhuusa mareeb oo sii kordhaya
Dhuusamareeb (AB):-waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay dagaalo aad u culus oo shalay ka dhacay gudaha Degmada Dhuusa mareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud. Dagaaladaasi oo u dhexeeyay Xarakatu shabaabul Mujaahidiin iyo Ururka Ahlu suna ayaa yimid kadib markii […]
Maxaa ka soo baxay Shirkii IGAD ee arimaha Soomaaliya+SAWIRO
Adis-ababa(AB):-Shirkii madaxda IGAD ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Adis ababa ee dalka Itoobiya ayaa laga soo saaray qodobo 15 ka kooban kuwaasoo badankood looga hadlayay arimaha dagaalada Soomaaliya ka socda iyo ciidamada deriska ee dalka soo galay. Inta badan […]
IGAD COMMUNIQUE ON THE SITUATION IN SOMALIA AND A BRIEFING ON THE OUTSTANDING ISSUES OF THE SUDAN COMPREHENSIVE PEACE AGREEMENT
COMMUNIQUE OF THE 19th EXTRA-ORDINARY SESSION OF THE IGAD ASSEMBLY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON THE SITUATION IN SOMALIA AND A BRIEFING ON THE OUTSTANDING ISSUES OF THE SUDAN COMPREHENSIVE PEACE AGREEMENT ADDIS ABABA, 25th November, 2011 The […]
Ra’iisul Wasaare C/weli Gaas iyo Xubno ka tirsan Golihiisa Wasiirada oo ku ciyaaray Xeebta Liido ciyaar kubada cagta ah+SAWIRO
Muqdisho(AB):-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka tirsan golihiisa Wasiirada ayaa galabta ciyaaro Kubadda Cagta uga qeybgalay Xeebta Lido ee degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho, iyadoo ciyaartan uu daawanayay mas’uuliyiin ay […]
Arday ka qalin jebiyey Machadka EAU-FTMS Boosaaso +SAWIRO
Kenyaati badan oo lagu laayay Magaalada Gaarisa
Gaarisa (AB):-Wararka laga helayo Magaalada Gaarisa ee Dalka Kenya ayaa sheegaya in weerara qaraxyo loo adeegsaday oo magaaladaasi xalay ka dhacay ay sababeen dhimashada Kenyaati badan. Wararka ayaa tilmaamaya in ugu yaraan 5 kenyaati ah dhinteen xalay markii weeraro kala […]
Shirkii IGAD oo Maanta ka furmay Dalka Itoobiya
Adis ababa (AB):-Waxaa Maanta si rasmi ah uga furmay Dalka Itoobiya shirkii Madaxda dalalka IGAD ay ku balansanaayeen kaasoo ay ka soo qeybgaleen madaxweynayaasha inta badan dalalka ku jira Ururka Goboleedka IGAD. Waxyaabaha shirkaasi looga hadli doono galabta ayaa la […]